Doorashada Madaxtinimada Masar (Wajiga 1aad) | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Faallo, WARARKA	> Doorashada Madaxtinimada Masar (Wajiga 1aad)
Wednesday, May 23, 2012 Laaska News
Wajiga hore ee doorashadan oo soconaysa laba maalmood oo ah maanta iyo Barri ayaa la sheegay inay noqonayso tii ugu horreysay ee ka dhacda Masar oo ay dadku si xor ah codkoodu udhiibanayaan.
Tartanka doorashada Madaxtinimada dalka Masar oo saaka ka bilaabantay dalka ayaa ah mid aad u adag oo aan la saadaalin karin cidda ku guulaysanaysa,waxaana u tartamaya dhawr iyo tobon Musharax,waxaana lagu soo waramayaa in tartanka dhabta ah uu ka dhexdhacayo afar ka mid ah musharixiinta oo ay ugu shacbiyad badan yihiin kuwaas oo isugu jira 2 kasoo jeeda Islaamiyiinta Masar iyo 2 horrey ula soo shaqeeyay nidaamkii hore ee Masar.
Afarta Musharax ayaa waxay kala yihiin:
1.Maxamed Morsi (taageerada Akhwaan Muslimiinka)
2.Cabdulmuncim Abu Al Fatuux (taageerada Islaamiyiinta Qunyar socodka).
3.Axmed Shafiiq (EX Taliyihii Ciidanka Cirka iyo Ex.R/Wasaare)
4.Camar Muuse (Ex.Wasiirkii Arrimaha Dibadda),waxaa kale uu noqday madaxii Ururka Jaamacadda Carabta).
Dalka Maxaa Ka Dhacay?
Dalka Masar waxaa horrey uga dhacay kacdoon rabshado watay oo ay dad badani ku dhinteen oo lagaga soo hor jeeday xukuumaddii uu hogaaminayay Madaxweynihii hore ee Masar Xusni Mubaarak taaasoo keentay in madaxweynihii dalka uu xukunkii kadago ama looga tuuro 11kii Feb 2011oo hadda laga joogo 15 bilood (Akhri: War deg deg ah Masar:Madaxweynihii Masar oo xilka ka dagay) , waxaanna talada dalka la wareegay ciidamada,muuddo ka dibna waxaa la sheegay in Mubarak lagu hayo xabsi guri,kadibna la dhigay xabsiga(Akhri:Egypt – Mubarak under house arrest ),waxaana socda fadhiyo maxkamadeed oo maxkamad lagu saarayo Mubarak,xubno kamid ah qoyskiisa iyo masuuliyiin kale oo xukuumaddiisa ka mid ahaa,maxkamadaas oo ah mid isdaba joog ah oo marba dib loo dhigo walina aan la gaadhin xukun rasmi ah .
Mubaarak ayaa waxaa uu talada masar lawareegay kadib markii madaxweynihii waddanka Masar Anwar Saadaat la dilay 1981,waqtigaas oo hadda laga joogo ku dhawaad 30 sano.
Mubarak (oo hadda 83-84 jir ah,1928,xaaladdiisa caafimaadna laga dayrinayaa) muddadii uu xilka hayay xiriir fiican ayuu lalahaa reer Galbeedka,wuxuuna ahaa muddo badan hogaamiyaha kaliya ee wax laga waydiiyo ama loo maro arrimaha dhinaca carabta, Bariga dhexe, Bariga & Waqooyiga Afrika.
Waxaa xusid mudan in Islaamiyiintu ay horrey ugu guulaysteen xubnaha ugu badan ee Baarlamaanka.
Arrintaas kahor iyo kadibba waxaa soo kordhayay dareen ay caalamku ka muujiyeen isbadalka ka dhacay masar iyo awoodda meesha kasoobaxday halka ay markii hore ay taageerayeen isbadalka iyo rabshadihii,kacdoonadii lagu riday xukuumaddii Mubaarak.
Waxaa la filayaa in muddo toddobaad ah lagu soosaaro natiijada doorashada mana muuqato in wax quman ay kala cod bad naanayaan.
Wajiga Labaad ee doorashada ayaa lagu wada inay dhacdo bishan soo socota (16 – 17 ka juun) ayna dhex marto labada musharax ee ugu cod bata doorashada maanta iyo Barri ka dhacaysa Masar sida lagu sheegay warbaahinta.
Waxaa is weydiin leh:
Haddii ay Islaamiyiintu ku soo baxaan doorashada Madaxtinimada, Muxuu noqon doonaa isbadalka ka dhacaya bariga dhexe?
Ciidamaduse masamayn doonaan inqilaab?
Mubarak xilka maka dagay mise waa la inqilaabay oo Ciidamada ayaa qabtay?
Go’aanada Shirkii Addis Ababa Ee Saxiixayaasha Heshiiska Siyaasadeed Ee Xaaladda Kala Guurka Soomaaliya (English) US – Romney wins North Carolina, Indiana and West Virginia